အိုမန်ပုံမှန်မဟုတ်သော ဦး တည်ရာ ခရီးသွားသတင်း
ဘယ်ကနေသွားမယ်လို့သင်ထင်သလဲ အိုမန်ကိုသွားမယ်? ကမ္ဘာပေါ်ရှိခရီးသွား most ည့်သည်များအများဆုံးစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်နိုင်သော်လည်း visitors ည့်သည်များရှိသည်။ ဤသည် Sultanate ဖြစ်ပါတယ် အာရှမှာ နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနယ်စပ်။
အိုမန်ရှိပါတယ် ကမ်းခြေများ, သဘာဝသိုက်, တောင်များ, သဲကန္တာရ နှင့်သင်တန်း, အများကြီး သမိုင်း။ သငျသညျ "ထူးခြားဆန်းပြား" နေရာများကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, ယနေ့ငါသင်တို့ကိုအပေါ်လမ်းညွှန်ထားခဲ့ပါ အိုမန်မှာဘာလုပ်ရမလဲ အဲဒါကိုမမေ့နိုင်တဲ့ခရီးတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။
အိုမန်သို့သွားရန်စီစဉ်သောအခါသင်လိုအပ်သည်မလိုသည်ကို ဦး စွာသိသင့်သည် ဗီဇာဒါတွေအားလုံးကနိုင်ငံတွေကြားကသဘောတူညီမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်။ များသောအားဖြင့်ဗီဇာသည်ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင်ပြုလုပ်သည်၊ သို့သော်စစ်ဆေးသင့်သည်။
အိုမန်ကိုလေယာဉ်နဲ့သွားမယ် ဥရောပ၊ အာရှနှင့်အမေရိကရှိမည်သည့်မြို့မှမဆို။ များသောအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုများသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့မှုငယ်များရှိကြသည်။ ကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်တွက်ချက် ဥရောပကနေခုနစ်နာရီ။
အိုမန် အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် ၎င်းတွင်လေဆိပ် ၄ ခုနှင့်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး OMM Air သည် Muscat လေဆိပ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Salam Air တို့ရှိသည်။ သင်သည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှရောက်ရှိပါကနယ်စပ်ဖြတ်ကူးငါးခုရှိသည်။ ဒါ့အပြင် အိုမန်သို့လာသည့်သင်္ဘောများရှိသည်, ဇိမ်ခံလိုင်းများ၏, sultanate ရှိဆိပ်ကမ်းငါးခု၏အားသာချက်ကိုယူ။
ဘယ်အချိန်မှာ အိုမန်ကိုလှည့်ပတ် ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်: သို့မဟုတ်ခြားနားချက်များ ခရီးစဉ်သို့မဟုတ်သင်ဝင်လာသည် ကူးတို့၊ ဘတ်စ်ကား၊ တက္ကစီများသို့မဟုတ်ငှားရမ်းသောကားများ။ ဘတ်စ်ကားများသည်လုံခြုံ။ စျေးပေါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးလည်ပတ်သည်။ အစိုးရကုမ္ပဏီသည် Mwasalat ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မြို့ကြီးများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲအခြားကုမ္ပဏီများလည်းရှိသည်။ NFC, အမျိုးသားအဆင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ပထမတန်းစားနှင့်အလွန်မြန်သောကူးတို့ဖြင့်ကူးတို့ကမ်းရိုးတန်းမြို့အချို့အကြားကူးတို့သွားနိုင်သည်။
အ တက္ကစီ ၎င်းတို့သည်ထိရောက်မှုရှိပြီးစျေးနှုန်းနှင့်အညီအဆင်ပြေသည်။ ၄ င်းတို့သည်လိမ္မော်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကားများဖြစ်ပြီးလေဆိပ်များမှမောင်းနှင်သောတက္ကစီအဖြူနှင့်အပြာများရှိသည်။ လူတိုင်းတွင်စက်များမရှိကြပါ ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူစျေးနှုန်းစီစဉ်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ကားငှားရမ်းခြင်းကသင့်ကိုပိုပြီးလွတ်လပ်မှုနှင့်သင်၏ခရီးကိုအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းကိုပေးသည်။ အေဂျင်စီတွေအများကြီးရှိတယ်။
သို့သော်အိုမန်မှတစ်ဆင့်ပြောင်းရန်အဆင်ပြေသလား။ ပုံရသည် ၎င်းသည်အိမ်နီးချင်းများထက်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာဖြစ်သည် နှင့် ၎င်း၏လူတွေတကယ်veryညျ့ဖြစ်ကြသည်။ Su လမ်းကွန်ရက်ကအရမ်းကောင်းတယ် ခင်ဗျားပြောတာကိုလိုက်နာရုံပါပဲ ဘယ်သွားသွား၊ မြင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ- အဝတ်အစားသည်ရှေးရိုးစွဲ (ဒူးခေါင်းနှင့်ပခုံးအဖုံး) ထားရမည်၊ ဆူညံခြင်းမရှိဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်း။ ခရီးစဉ်မရှိဘဲတစ်ယောက်တည်းမသွားပါနှင့်။
အိုမန်ကိုသွားရန်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာစက်တင်ဘာမှမတ်လကြားဖြစ်သည် အပူချိန် 25 နှင့် 30 ºCအကြားဖြစ်တဲ့အခါ။ Aprilပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိနွေရာသီဖြစ်ပြီးအလွန်ပူသည်မှာ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးလက်တွေ့ကျသောကိစ္စရပ်များတွင်၊ ဒီမှာငွေကြေးဟာ OMR ဖြစ်ပါတယ် (Omani Rial) OMR 1 မှ 50 အထိမှတ်စုများရှိပြီး baisas ဟုခေါ်သောသေးငယ်သည့်ဂိုဏ်းဂဏများမှာ ၁၀၀ မှ ၅၀၀ အထိဖြစ်သည်။ baisa တစ်ထောင်သည် Rial တစ်ခုနှင့်ညီသည်။
ဤအရာအလုံးစုံကိုသိလျက်အကျွန်ုပ်တို့သည်အိုမန်သို့အဘယ်သို့သွားနိုင်ပါမည်နည်း။ ကောင်းပြီ တကျိပ်တပါးသောဒေသများရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့မြို့နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည် Muscat သို့မဟုတ် Muscat ။ မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ် နှင့်လူ ဦး ရေတစ်သန်းအောက်သာရှိသောပင်လယ်ကွေ့ကမ်းခြေတွင်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။
Mascate ဒါဟာပေါ်တူဂီကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည် XVI XVII ရာစုနှစ်တွင်၎င်းသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ သင်ဒီနေ့လုပ်နိုင်တယ် ပြတိုက်သွားရောက်ရန်၊ ကလေးသူငယ်ပြတိုက်၊ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၊ အမျိုးသားပြတိုက်နှင့်အနုပညာပြခန်းများစွာရှိသည်။ တော် ၀ င် Muscat အော်ပရာရုံ၊ Muttrah ဟင်းချို, အာရေဗျအတွက်အသက်အကြီးဆုံး။ ဤနေရာတွင်ရှိသည့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဤမြို့၏သမိုင်းဝင်throughရိယာကိုအမြဲဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်၊ ယဉ်ကျေးမှုလည်းရှိသည်၊ ကမ်းခြေသို့သွားနိုင်သည်၊ ၎င်းနှင့်၎င်း၏အပန်းဖြေစခန်းများသို့ပျော်မွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ရေငုပ်ခြင်းဖြင့်သွားနိုင်သည် ...
ဟုတ်လား Yiti သဲသောင်ပြင်ကီလိုမီတာရှည်သည့်ရွာတစ်ရွာတည်း၌ပင် Majlis အယ်လ်ဂျင်းဂူကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည် Quriyat ငါးဖမ်းရွာ, ၏ကျောက်ရှုခင်း Wadi အယ်လ် Khoud၏အပေါက် Bimmah၊ Al Amsab ရွှံ့ညွန်များ၊ Daymaniyat ကျွန်းများ ...
Musandam ၎င်းသည်မြောက်ဘက်တွင်ရှိပြီးကျန် Oman မှယူအေအီးမှခွဲထုတ်ထားသည်။ ဒီမှာရှုခင်းတွေပါတကား! မီတာ ၂,၀၀၀ ကျော်သောတောင်များ၊ ရေကူးခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်း၊ ဒီကျွန်းဆွယ်exploreရိယာစူးစမ်းဖို့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ် Khasab ၏မြို့။ fjords နှင့်တောင်များကိုစူးစမ်းလေ့လာသည့်လင်းပိုင်များသို့မဟုတ် ၄ × ၄ ခရီးစဉ်များကိုကြည့်ရှုရန်အပန်းဖြေစခန်းများသည်ဤအရပ်မှထွက်ခွာသည်။
မြို့တော်၌တည်ရှိ၏ Khasab Castle, Jebel al harim နှင့်သင်အချို့ထည့်သွင်းလိုလျှင် တစ်ရက်ခရီး ဟုတ်တယ် ကြေးနန်းကျွန်းနှင့် Khawr Najd ဒါမှမဟုတ်ပါ Kumzar ကျေးရွာ၊ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်အေဂျင်စီတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းဖြင့်သာပြုလုပ်သည်။
တစ်ထောင်ကီလိုမီတာကွာအိုမန်မြို့တော်ကနေဖြစ်ပါတယ် ofရာဝတီ။ သင်သည်လေယာဉ်ဖြင့်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အချိန်တန်လျှင်ကားဖြင့်သွားနိုင်သည်။ လှပသောကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိဆလာဘက်သို့သွားနိုင်သည်။ အမှန်တရားကဒါပဲ ဝေးတောင်ပိုင်းဒေသ ကဲ့သို့သောတကယ်လှပသောဆွဲဆောင်မှုအများကြီးရှိပါတယ် Mughsayl ပေါက်ကွဲနိုင်သောတွင်းများ၊ တမန်တော် Ayoub ၏သင်္ချိုင်းနှင့် Frankincense ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ။
ကမ်းရိုးတန်းတွင်ဖြစ်ကြသည် Hallaniyat ကျွန်းများ, သင်ကငုပ်နှင့် snorkel နိုင်သည့်နေရာလည်း၎င်းသည်၏နေရာဖြစ်သည် Wadi Dawkah Reserve၊ Al Fizayah သဲသောင်ပြင်၊ ပျောက်ဆုံးနေသော Ubar မြို့, အ Jarzeez နွေ ဦး Thamrit ခုံများ, Hasik ကမ်းပါး, Al Baleed ရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံ သို့မဟုတ် Mirbat ၏ကမ်းခြေ။ ပြီးတော့ပူပြင်းပြီးစိုစွတ်သောရာသီဥတုကြောင့်၎င်းသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။
ကျန်တဲ့အိုမန်ဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့ထွင်လို့မရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါအားလုံးမှာအာဝူတာ၊ Al Buraimi၊ တောင်ပိုင်း၊ Al Batinah မြောက်၊ A'Harqiyah တောင်နဲ့မြောက်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောခရီးသွားအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်တက်ကြွနေပါသလား၊ သင်ပြတိုက်များသို့သွားရောက်လည်ပတ်လိုပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » အိုမန်, ပုံမှန်မဟုတ်သော ဦး တည်ရာ